Inona no hevi-dehibe? Open-tsaina
Fivavahana & Spirituality Atheism & Agnosticism
Inona no hevi-dehibe? - Open Mindedness
Fametrahana ny fifandraisana ara-pihetseham-po sy ara-tsaina eo anelanelanao sy amin'ny hevitrao
Ny teny hoe "fisainana mitsikera" dia ampiasaina, amin'ny endrika iray na hafa, manerana an'ity tranonkala ity - fa inona no dikan'izany? Ny sasany mety hahatsapa fa ny fahitana fotsiny ny fahadisoana amin'ny hafa sy ny hevitry ny hafa, fa tsy izany no izy. Amin'ny ankapobeny, ny fisainana mananontanona dia midika fa ny fampivoarana ny elanelana ara-pihetseham-po eo amin'ny tenanao sy ny hevitra - na ny an'ny tenanao na ny an'ny hafa - dia ny hanombana tsara kokoa ny fahamarinan'izy ireo, ny fahamendrehany ary ny fahamendrehany.
Ny fisainana krizy dia ezaka handraisana valim-pinoana azo itokisana sy ara-tsaina momba ny zavatra mety hitranga amin'ny finoana sy tsy finoana. Ny fomba fisainana dia mampiasa ny fitaovana ampiasaina amin'ny lojika sy ny siansa satria manasokajy ny fisalasalana amin'ny tsy firaharahiana na ny dogmatisma, ny saina amin'ny finoana, ny siansa momba ny pseudoscience, ary ny rationality amin'ny fisainana maniry. Ny fisainana hevi-diso dia tsy manome antoka fa ho tonga amin'ny fahamarinana isika, kanefa izany dia mahatonga azy io ho azo atao mihoatra noho ny zavatra hafa.
Mety ho mora kokoa ny manazava ny hevitry ny fisainana mananontanona raha mandalo ny sasany amin'ireo toetra tena manan-danja izay ilaina amin'ny fisainana mikasika zavatra manan-danja:
Ny olona maniry ny hieritreritra mikasika zavatra toy ny politika na ny finoana dia tsy maintsy misaintsaina. Izany dia mitaky ny hisokatra amin'ny mety hisian'ny hafa fa tsy ny olon-kafa ihany fa diso koa. Matetika loatra ny olona no miteraka adihevitra be dia be nefa tsy misy fotoana tokony hiheverana fa mety diso izany.
Mazava ho azy fa azo atao ihany koa ny "mieboebo" loatra satria tsy ny hevitra rehetra dia mitovy avokoa na manana ny lanjany mitovy amin'ny hoe marina. Na dia tokony havelantsika ara-teknika aza ny mety hisian'ny olona iray, dia mbola mila mitaky ny hanohanana azy isika - raha tsy afaka na tsy manao izany izy ireo, dia mety hohamarinina isika raha mandà ireo fanambarana ireo ary manao zavatra toy ny hoe tsy marina.
Ny fahasamihafana sy ny antony samihafa
Na dia mazava amintsika aza fa antony ara-lojika sy ara-pihetseham-po ho an'ny fanekena hevitra iray, mety manana antony ara-pihetseham-po sy ara-pihetseham-po koa isika mba hanaiky izany - antony mety tsy ho tsapantsika tanteraka. Zava-dehibe amin'ny fisainana mitsikera anefa, fa mianatra ny manasaraka ny roa isika satria ity farany dia afaka manelingelina ny taloha.
Ny antony ara-pihetseham-po ho an'ny zavatra inoana dia mety ho azo takarina tsara, fa raha diso ny lojika ao ambadiky ny finoana, dia tsy tokony hodinihintsika amin'ny farany ny finoantsika. Raha manatona ny finoantsika isika amin'ny fomba fisainana sy fisainana, dia tokony ho vonona ny hanilika ny fihetseham-pontsika isika ary hanombantombana ny lojika sy ny fisainana amin'ny endriny - mety handà ny finoantsika mihitsy aza raha toa ka tsy mahatratra ny fepetra ara-lojika izy ireo ( jereo ny Open-Mindedness).
Miresaha amin'ny fahalalana fa tsy ny tsy fahalalana
Noho ny antony ara-pihetseham-po ara-pihetseham-po na ara-psikolojika hafa eo amin'ny finoantsika, dia tsy mahazatra ny olona mandroso sy miezaka ny miaro ireo zavatra inoana ireo na inona na inona raha toa ka malemy ny lojika na ny porofo amin'izy ireo. Eny tokoa, indraindray dia miaro hevitra ny olona indraindray na dia tsy mahafantatra firy momba izany aza izy ireo - mieritreritra izy ireo fa tsy manao izany.
Ny olona izay miezaka mampihetsi-poko ihany anefa dia manandrana misoroka ihany koa fa tsy efa fantany ny zavatra rehetra ilainy. Ny olona toy izany dia vonona ny hamela ny olona iray tsy manaiky hampianatra azy ireo zavatra manan-danja ary tsy miady hevitra amin'ny toerana iray raha tsy fantany ireo zava-misy manan-danja sy manan-danja.
Tsy fahamendrehana ny fahatsapana
Misy ireo hevitra izay mety marina ary hevitra izay azo antoka fa marina, saingy raha tsara ny manana hevitra izay ao anatin'io vondrona farany io dia tsy maintsy takatsika fa faran'izay kely lavitra noho ny taloha ny vondrona farany. Na dia izany aza dia mety ho zavatra hafa izany, tsy azontsika antoka tanteraka ny momba ireo zavatra maro - indrindra ireo raharaha izay ifantohana amin'ny adihevitra maro.
Raha misy olona manakiana ny fisalasalana sy ny fisainana manakiana, dia tadidin'izy ireo fa azo antoka fa marina ny fampisehoana, tsy midika izany fa nasehon'izy ireo na nampiseho fa azo antoka fa marina izany.
Ny fahamarinana sasantsasany dia mila faharesen-dahatra matanjaka, fa ny fahamarinana azo antoka dia mitaky ny faharesen-dahatra amam-panahy fotsiny - izany hoe tokony hino azy ireo toy ny porofo sy ny anton-kevitra.
Halaviro ny tsy fahazoan-kevitra momba ny fiteny
Ny fiteny dia singa sarotra sy tsiro. Izany dia ahafahantsika mifampizara hevitra isan-karazany, anisan'izany ny hevitra vaovao, fa ny fifehezana sy ny fahasarotam-po dia mitarika amin'ny karazana tsy fifankahazoana, ny tsy fitoviana ary ny fahamendrehana. Ny zava-misy, ny eritreretintsika fa mifampiresaka dia mety tsy ho ny zavatra hafa raisina, ary ny zavatra raisintsika dia mety tsy ny zavatra hafa tadiavin'ny hafa hifandraisana.
Tsy maintsy mamela ny fisian'ny ambiguities, ny fahamendrehana ary ny tsy fahazoan-kevitra ao anatin'ny fifandraisantsika ny fisainana. Ny olona izay miezaka mieritreritra dia tokony hiezaka mafy hanafoana ireo toe-javatra ireo araka izay azo atao - ohatra, amin'ny fiezahana hahazo ny teny fototra mazava tsara voafaritra aloha fa tsy mamela adihevitra amin'ny olona mampiasa teny mitovy amin'izany mba hiresahana hevitra samy hafa .
Avilio ny trangan-javatra iombonana
Ny ankamaroan'ny olona dia afaka mandanjalanja tsara ny fiainany amin'ny fiainany andavanandro. Raha ampy mba hivelomana izany, nahoana no mampitombo ny fotoana sy ny asa fanampiny mba hanatsarana azy? Ireo olona maniry ny hanana fenitra avo lenta amin'ny finoany sy ny fisainany dia tsy afaka ny tsy maintsy atao amin'ny tsy fahampiana farafaharatsiny fotsiny mba hahazoana fiainana - ilaina ny fampianarana sy fampiharana bebe kokoa.
Noho izany, ny fisainana tsara dia mitaky ny hahatonga ny olona iray ho zatra amin'ny fahadisoan-kevitra mahazatra izay heverin'ny ankamaroan'ny olona amin'ny fotoana iray na hafa fa tsy mahatsikaritra izany.
Ny fahadisoam-panantenana dia diso amin'ny fisaintsainana izay mandrehitra hevitra sy adihevitra miverimberina; Ny fanao amin'ny fisainana manakiana dia tokony hanampy ny olona hisoroka azy ireo ary hanampy amin'ny famantarana ny fisehoany amin'ny hevitry ny hafa. Ny soso-kevitra iray izay mitaky hadisoana dia tsy afaka manome antony tsara hanaiky ny famaranana; Noho izany, raha mbola misy ny fahadisoam-panantenana dia tsy tena mahomby ny fanoherana.
Aza miverina amin'ny famaranana
Mora sy mahazatra ho an'ny olona ny mandalo haingana amin'ny famaranana voalohany sy mazava indrindra amin'ny zava-manahirana rehetra, fa ny zava-misy dia ny fehin-kevitra mazava dia tsy ny marina foana. Indrisy anefa fa rehefa misy olona manaiky ny famaranana dia sarotra aminy ny manolotra azy ho an'ny zavatra hafa - na izany aza, tsy misy olona te-ho diso, moa ve izy ireo?
Satria tsara kokoa ny misoroka ny olana fa tsy miezaka ny miala amin'ny zava-manahirana indray mandeha ao, ny hevitra misaina dia manantitrantitra ny fisainana tsara - ary midika izany fa tsy mitsambikina amin'ny famaranana raha afaka misoroka izany ianao. Mandehana mialoha ary fantarao ny fisian'ny tsoa-kevitra mazava tsara satria mety amin'ny farany izany, fa aza raisinao izany raha tsy efa nodinihina ireo safidy hafa.
Ireo rehetra ireo dia famintinana vetivety ireo toetra sasantsasany izay tsy maintsy iantehan'ny olona mba hieritreretana am-pihetseham-po sy fisalasalana momba ny zavatra. Na dia mety tsy ho hita miharihary avy hatrany aza izany, tsy mila filaminana na siansa ianao raha te ho lasa mpandinika tsara kokoa. Ny fanabeazana sasany momba ny olana fototra dia ilaina, saingy tsy misy izay tsy mahazatra ny salan'isa.
Ny endriky ny sehatra lojika fototra dia mety ho tratry ny olana, nefa amin'ny farany dia tsy misy afa-tsy fomba iray ahafahana mahazo aina amin'izany: practice. Tsy ho ohatra tsara, ohatra, ianao raha mahatsapa fa diso ny mamantatra ny lisitr'ireo anarana. Fa tokony haka fotoana hovakiana tsara kosa ianao ary hianatra hamantatra ny fahadisoana toy izany. Arakaraky ny fotoana laninao amin'izany no hahatonga azy ho voajanahary bebe kokoa - ary ho tsaroanao ny anaran'ny fahadisoam-bavaka.
Toy izany koa ny hevitra hafa amin'ny lojika fototra. Raha mieritreritra ny momba azy ireo ianao ary mampiasa azy ireo, dia hahatsapa fifaliana amin'izy ireo ianao ary hamantatra ireo paikady sy teknika sasantsasany hentitra amin'ny zavatra rehetra vakinao raha tsy tena miezaka. Ny endri-tsoratra manokana dia hanaraka azy manokana. Raha liana amin'ny fampiharana ianao dia misy sehatra iray ahitanao fanampiana ity forum ity. Hahazo fahafaham-po hamakiana marobe maromaro ianao ary hahita ny maro amin'ireo teknika voalaza ao amin'ity tranonkala ity. Azonao atao ihany koa ny mametraka fanontaniana momba ny valim- pahalalahana na ny fahamendrehana misy ny fanoherana manokana - betsaka ireo olona afaka manampy anao hahatakatra kokoa raha misy diso hevitra na diso.
Ireo mpikomy sy ny fisarahana ny Fiangonana sy ny fanjakana
Inona ny Epistemolojia?
Nahoana ary ny Siansa tsy manam-paharoa no ambony noho ny fivavahana?
Sarimihetsika biografikan'i Socrates
Fifampiarahabana - Finoana vokatry ny antony
Sanda mahazatra sy fianakaviana mendrika any Amerika
Ny zo mitovy amin'ny zo manokana
Ny olan'ny fieboeboana
Meyer v. Nebraska (1923): Fitsipi-pitondran'ny governemantan'ny sekolim-panjakana
Inona no Valim-bazana Maimbo indrindra?
Ahoana ny fomba fitondrana gymnastique Rip
Nomady sy olona monina any Azia
Ankoatra ny boky: Hands-Learn amin'ny bokinao misy ankizy tianao
Inona no atao hoe Copula?
Iza moa i Simone avy ao amin'ny Baiboly?
Ady Meksikana-Amerikana: Battle of Chapultepec
Ny ozona Meksikana
5 Fahadisadalàna teo an-damosina
Mpitondra izao ao amin'ny Lohataona Arabo Lohataona
Famerenana famerenam-bola amin'ny fampiasana fehezanteny iray
7 Torohevitra ho fampivoarana ny fahaizanao miteny miteny
Ny Lalao Olaimpikan'ny Ririnina 2010
Zava-dehibe ho an'ny fandrosoan'ny voa
Ahoana no ahafahana miala aorian'ny fahalavoana raha tsy miala amin'ny siny?
Rehefa Krismasy Nodimandry tamin'ny Zoma, Afaka Hifankatia ve ny Katolika?
Famaritana ankapobeny amin'ny chimie
Fahadisoana mahazatra amin'ny teny anglisy - Nanjavona teo aloha
Inona no atao hoe Lean sy Rich amin'ny fampiharana ny RC Nitro?
Inona no atao hoe oram-baratra?
Hockey Schools any Kanada
Lilith ao amin'ny Torah, Talmud ary Midrash
Ireo lehiben'ny Colossal an'ny Olmec
Folklore: Inona no mety?
Shiloh nataon'i Phyllis Reynolds Naylor